Akụkọ - Ihe ngosi 126 nke Canton
Na nnọchite PETROKING PETROLEUM HEBEI CO., LTD, mmadụ ise n'ime ndị njikwa anyị gara ụbọchị ise Canton ngosi na Ọkt. 14th 2019 nnukwu nsonaazụ na ngosi a.
Ndị ahịa gara ileta ngosi anyị bụ India, Thailand, Vietnam, Russia Syria, South Korea, Taiwan, Japan, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Sudan, South Africa, Australia, Mongolia, Turkey, Saudi Arabia, Iraq, Netherlands, Egypt na Italytali, anyị na ndị ahịa iri dị na mba ndị a na-azụlite azụmaahịa ahụ, ma na-enweta uru ọ bụla na mmeri.
N'ime ihe ngosi Canton a, anyị na-agbasawanye ọrụ ọrụ yana echiche, melite ogo ngwaahịa, ma wuo ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ, nye egwuregwu zuru oke maka usoro ụzọ niile maka ịmeghe na "na-ere ma na-erite uru ụwa", kaadị azụmahịa mere na China, na-akwado ụlọ ọrụ iji na-erigbu ahia nke mba ụwa, na-eme ka mma dị mma, na-eme ka mma, na-arụ ọrụ siri ike ngwaahịa na-eru ụwa.
Mgbe ngosi ahụ gasịrị, iji nwekwuo ike melite ma melite ụlọ ọrụ anyị, anyị chịkọtara usoro kachasị njikarịcha: nke mbụ, anyị ga-anọgide na-agbaso ogo dị elu na mmepe iji gboo mkpa nke ndị ahịa dị iche iche. Anyị na-akpọsa ma na-akwalite ngwaahịa anyị dị elu na nke a Canton ngosi, otingkwalite enterprise ika, ịgbasa mmetụta nke ụlọ ọrụ, na-eme ka ndị ọzọ ahịa mara anyị na ngwaahịa na ika na-ere anyị ngwaahịa niile n'ụwa, anyị ga-mụbaa ọnụ ọgụgụ nke enterprise na-eme ka ngwaahịa gbanwere si price uru na teknuzu, ọkọlọtọ, ika, àgwà, ọrụ dị ka isi nke mbara uru. Nke abụọ, ọrụ ka mma maka ndị ahịa na-arụkọ ọrụ ọnụ. na mmalite nke mmepe ụlọ ọrụ dị ka ihe bụ isi, mbọ iji jeere ndị ahịa anyị. Ebumnuche anyị bụ "ndị ahịa bụ chi anyị", na asọmpi ngosi nke oge a, n'okpuru amụma akụ na ụba ụwa nke mmeri bara uru, ọ bụghị naanị na anyị na-a attentiona ntị na ngwaahịa dị elu, ụkpụrụ dị elu, anyị na-elebara afọ ojuju ndị ahịa anya. , mmetụta na ahụmịhe onye ọrụ, naanị afọ ojuju ndị ahịa bụ mgbọrọgwụ nke mmepe ụlọ ọrụ na nlanarị ogologo oge. Nke atọ, bulie usoro ụlọ ọrụ n'ihu.With na-aga n'ihu mmepe nke ụlọ ọrụ na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ahịa, anyị na-aga n'ihu na-ebuli nke anyị Ọdịdị mgbe na-akwalite mmepe nke enterprise, nke mere na ndị enterprise nwere ike nweta mma imekọ ihe ọnụ site n'ime na n'èzí, ka ya na-akwalite ụwa ọnụ nke enterprise.
Anyị ga-ekelekwa ndị ọrụ niile nke ụlọ ọrụ anyị maka mbọ ha na-agba iji mee ka ngosi Canton a nwee ihe ịga nke ọma. Na-achịkọta ihe gara aga ma na-elepụ anya n'ọdịnihu, na-achọ ka anyị nwekwuo ọganiihu na ngosipụta Canton ọzọ.